Zoonii Diinagdee Gadaa: Magaalaa haaraa MNO Moojoo fi Adaamaa jidduutti ijaaruuf karoorse - ETHIOPIANS TODAY
MADDA SUURAA,ABBAA TAAYITAA ZOONII DIINAGDEE ADDAA GADAA
Magaalaa kana ijaaranii xumuruuf waggoota 40 fudhata jedhame
Pirojektii ‘guddaan’ Zoonii Diinagdee Addaa Gadaa jedhamuun mogga’e mootummaan naannoo Oromiyaa ifa godhe magaaloota Mojoo fi Adaamaa gidduutti ijaarrama.
Pirojektiin rakkoolee diinagdee biyyaatti keessa jiran furuu kaayyeffatee jedhame kun lafa hektaara 23,656 uwwisa.
Kunis lafa walakkaa bal’ina magaalaa Finfinnee gahu akka jechuuti.
Pirojeektin kun dhimmoota ijoo sadi milkeessuf hojiirra oolaa jiraachuusaa dubbatu Daayrektarri Olaanaa Abbaa Taayitaa Zoonii Diinagdee Addaa Gadaa Injinar Dammallaash Muluu.
“Carraa hojii uummata keenyaaf banuu, itti aansuunis hanqina sharafa biyya alaa qabnu bal’inaan furuu, inni sadaffaan immoo ce’umsi diinagdee qonna irraa gara indaastriitti taasifamu saffisaan akka adeemu taasisa” jedhu.
Baatilee muraasa dura yaadi isaa Caffee Oromiyaatiif dhiyaatee raggaasifameera.
Haa ta’u malee pirojektiin waggoota 40 keessatti xummuramuuf yaadame gaaffiiwwan buqqa’iinsa qonnaan bultootaan walqabatu, dhugummaan hojiirra ooluusaa fi kunneen biroo kaasaa jira.
Dhimmoota Waa’ee Zoonichaa Beekuu Qabdan…
Lafti zooniin Diinagdee Addaa Gadaa irratti ijaarramuuf karoorfatame hektaara 23,656 yemmuu ta’u, indaastriiwwan garaagaraa, manni jireenyaa, iddoo daldalaa /commercial zone/, iddoo tajaajila loojistikii akkasumas iddoo bashannanaa fi tuurizimii of keessatti qabata.
Zoonin Diinagdee Addaa Gadaa daldala sadarkaa addunyaatti dorgomaa ta’e fiduuf buufata xiyyaaraa guddaa naannoo Duukamitti ijaaramuuf yaadame waliin hidhuuf karoorfatamuusaa Injinar Dammallaash Muluu.
“Yaadni keenya zoonii diinagdee addaa biyya keessa qofa osoo hin taanee akka addunyaatti dorgomaa ta’u uumuudhaaf deemaa jirra” jedhan.
Yeroo ammaatti maastar pilaaniin pirojektichaa xummuramee hojiitti galamuusaa himaniiru.
Ijaarsi isaa boqonnaa gara garaatti qoodamee raawwatama
Ijaarsi Zoonii Diinagdee Addaa Gadaa waggoota 40 keessatti akka xummuramu kan eegamu yemmuu ta’u ijaarsichis boqonnaawwan afur of keessatti qabata.
Waggoota shanan boqonnaa duraatin lafa hektaara 3,150 misoomsuuf karoorfatameera.
Boqonnaa lammataan lafa hektaara 5,000 akkasumas boqonnaa sadaffaa waggoota 10 hanga 15 fudhatuun lafa hektaara 8,000 misoomsuu fi boqonnaa afraffaa waggoota 10 hanga 15 fudhatun lafa hektaara 7,800 misoomsuuf karoorfatamuusaa injinar Dammallaash Muluu himaniiru.
Yeroo ammaatti dizaayiniin pirojektichaa xummuramaa jira jedhameera.
Gama bajataan Mootummaan Naannoo Oromiyaa bu’uraalee misoomaa barbaachisoo ta’an kunneen akka bishaanii, humna elektriikii, telekoomii fi sirna dhangala’aa kan hojjetu yemmuu ta’u misoomni lafichaa abbootii qabeenyaan kan hojjetamu ta’a.
Dhimma Qonnaan Bultootaa
Buqqaatin qonnaan bultootaa fi badiinsi aadaa fi duudhaa uummata Oromoo dhimma ijoo waggoota darbanitti komiiwwan heddu kaasaa turedha.
Beenyaa gahaa malee buqqaafamuun jiraattotaa akkasumas pirojeektota lafa qonnaan bultootaa irratti hojjetaman irraa qonnaan bultootni fayyadamoo ta’uu dhabuun rakkoolee bal’inaan mul’achaa turanidha.
Haa ta’u malee taaten kun pirojektii Zoonii Diinagdee Addaa Gadaatiin akka irra hin deebi’amne Injinar Dammallaash Muluu himu.
“Akka kana duraa namni keenya beenyaan kaffalameefii kan ari’amu osoo hin taane abbaan lafa sanirra jiru bifa seeraatin beenyaan kaffalameefii jiruunsaas akka hin badne pirojekticha keessaa qooda /share/ akka qabaatu labsiidhaan mirkanaa’ee jira” jedhan.
“Namni buqqa’u hin jiru. Namni iddoo duraan itti jiraaturraa buqqa’ee gara iddoo biraatti deemu tokkollee hin jiraatu. Kuni sirriitti beekkamuu qaba.”
Mallattoo ‘Horooroo’ ykn Ulee Abbaa Gadaa magaalaa walakkaa dhaabbatu
“Namni daangaa sana keessa jiru hundi pirojekticha keessatti hammatamee jiruu fooyyee akka jiraatu labsiidhaan mirkanaa’ee jira. Kanaafuu waan labsiirra jiru gara hojiitti jijjiiruun dirqama keenya” jechuunis himan.
Lakkoofsi namootaa yeroo ammaatti iddoo pirojektiin Zoonii Diinagdee Addaa Gadaa irratti ijaaramuuf karoorfamerra jiran 33,000 hanga 35,000 akka ta’u Injinar Dammallaash himaniiru.
Yeroo ammaattis hojiin waa’ee jiraattota iddoo pirojektichaa ragaalee walitti qabuu hojjetamaa jiraachuu dubbatan.
“Maastar pilaaaniin yeroo hojjetamu iddoon duraan mana jireenyaa ture ammallee mana jireenyaa akka ta’udha kan taasifame. Kanaafuu namoota addaan faffaca’an bakka tokkotti walitti fiduudha malee namni buqqa’ee naannoo sanirraa deemu tokkollee hin jiru” jechuunis himaniiru.
“Filannoon wal hin qabatu…”
Akka naannoo Oromiyaattis ta’e biyyaatti lakkoofsi pirojektota dhagaan bu’uraa qofti kaa’amee achumaan hafan hedduudha.
Keessattuu tibba filannootti angawootni paartii biyya bulchuanii naannoleerra deemun dhagaa bu’uraa kaa’un waan baratamedha.
Haaluma kanaan namootni pirojektii Zoonii Diinagdee Addaa Gadaas filannoo biyyaalessaa jahaffaa ji’oota muraasa booda taasifamun hidhata qabaachuusaa shakkii qaban ibsatan ni jiru.
Qorannoon pirojektichaa bara 2019 eegaluusaa kan himan Injinar Dammallaash garuu, pirojektiin kun filannoo waliin hidhata akka hin qabne himu.
“Pirojektiin kun adeemsa isaa eegee deemaa kan jirudha malee filannoo dhiyaate kanaaf jecha kan fidne miti. Kana uummatnis quba qaba” jedhan.
“Projektichi filannoo wajin hidhata hin qabu. Sagantaa qaba. Sagantaa sanin ni raawwatama. Projektiin kun hojiirra oolunsaa waan hin oolledha” jechuunis dubbatan.